Fuula Tareen Best In Europe Inta lagu jiro Marxaladaha Moon | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Fuula Tareen Best In Europe Inta lagu jiro Marxaladaha Moon
Yurub waxaa ka buuxa farshaxan, taariikhda, iyo dhaqanka. Ma jiro wax la yaab leh ka dibna in ay sidoo kale guriga waa u Qorrax u fiican. Iyadoo Save A tareenka, tareenku oo dhan wuxuu ku saabsan yahay safarka, had iyo jeer ma Ahaado. Sidaas, dib u fadhiiso oo nasasho iyo in loo diyaar garoobo. Tani waxa uu noqon doonaa diyaafad sawir oo ka mid ah raacid tareenka ugu fiican Yurub.
Si aad u laado liiska raacid tareenka ugu fiican Yurub our, waxaan doortay qaababkii gaboobay ah – Croatia
Halkee ma waxaad ka furmo suuqa tareenka aad ku qaadi karto bidhaamaysa qurux badan markii ay booqaneysay Croatia. Croatia waxaa aad loogu yaqaanaa iyada cajiib ah iyo Qorrax u neefsan, sidaas darteed hubi in aad ka dhigi aad camera diyaar sida aad ku xidhan tahay in la helo raacid tareen Best Yurub intii lagu jiray qorrax halkan.
Marka aad ka fikirto Germany, aadan u malayn in ka mid ah oo haysta raacid tareenka ugu fiican Yurub intii lagu jiray Qorrax u dhac, laakiinse waxaa laydinku ulana yaabay doonaa waxa uu leeyahay in ay bixiyaan. Waxa kale oo aad maalin kasta ka Garden Ingiriisi ah in aad u hesho view this Munich. Ka fikir cirka cloudless iyo skyline ah magaalada qurux badan.
Germany ayaa sidoo kale waxay bixisaa tareenada Night ay dhacdo in aad rabto in aad sii galay qorrax aad safarka tareenka.
Tani waa mid ka mid ah waxyaalaha qarsoon ee ugu fiican u dhawray! iyo mid ka mid ah raacid tareenka ugu fiican Yurub, Waxay ku taalaa on bay ku Sardinia xeebta galbeed, Italy. S'Archittu waa miciinka badda yar oo kaliya kuwa ogaada ah! xeebta ugu weyn ee dhab ahaan waa wax aad la yaabtaan at, laakiin hubi in aad qaadato wax yar la socdo carraale-dhagxiyey yar u safray. Waxaad ku dhammaan doontaa waxa waxa qurxinta dhabta ah ee tuulada: xafiiltamaan nuuradda barbareeyay by tallaabada joogto ah oo badda ah. Haddii badda waa xawaal, sida caadiga ah sida ay tahay in xagaaga, ama xunxunna, caadiga ah ee xilliga qaboobaha, qorrax dhaca in S'Archittu had iyo jeer waa sabab uu u nasto oo ay qaataan waqti ay ku dheygaga.
dalka Our ugu danbeysay ee raacid tareen Best in Europe waa, Tuscany, ITALY
Waxaa jira sabab sababta "qorraxda Tuscan under" waa sida weedh xoojisay. Iftiinka ee Tuscany waa run ahaantii cajiib ah. Waxaa si fudud u lahaa in ay liiska our ee raacid tareen Best Yurub intii lagu jiray qorrax. Filo baqeen-u Waxyoon Habeen Qorrax u dhac kadib markii habeenkii. Ku lammaan tan la canab ah, tuulooyinka xoodan, xeebaha cajiib ah, iyo durkiya taariikhi ah oo aad leedahay wadadii sixir saafi ah.
Naples si Tareenadu Siena
Hubi in aad walaac kaliya waa adigoo camera ama app telefoonka diyaar u ah in wakhtiga ay qaataan quruxda waa Europe marka qorraxdu. Ballansan aad raacid tareenka ugu fiican Yurub nala at SaveaTrain.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog on your site, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-train-rides-europe-sunset%2F%0A%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#Sardinia #qorrax #sunsettravel europetrains Tranride Tuscany